True true: သိပ်ပံနညျးကြ အပြိုစဈမစဈ စဈဆေးနညျး
သိပ်ပံနညျးကြ အပြိုစဈမစဈ စဈဆေးနညျး
အမေး – ကမွတို့ လငမြယားနှဈယောကမြှာ ပှူနာတဈခု တကနြပေါတယရြှငြ့။ ကမွက အခုအသကြ၂၃ နှဈရှိပါပှီရှငြ့။
ကမွတို့ မိနြးကလေး သဘာဝအရ ယောကြွားလေးနဲ့ စပှီး နတေဲ့နမှေ့ာ သှေးကရွမယလြို့ ကမွအမွိူးသားက ပှောပါတယြ။ကမွ အဲလိုသှေးမကဘွူးတဲ့။ အဲဒါကှောငြ့ ကမွကို အပွို မစဈဘူးလို့ ပှောပါတယြ။ ပှီးတော့ ဘယသြူနဲ့ ဘာလုပခြဲ့လဲဆိုပှီးနစေ့ဉြ အဲဒါကိုပဲ ပှူနာလုပနြပေါတယြ။ အမှနတြကယကြို ကမွသူနဲ့မရခငြ ဘယသြူနဲ့မှ ဘာမှမဖှဈခဲ့ပါဘူး။ သူ့ကို ပှောပှတော့လဲသူကကမွကို မယုံပေးပါဘူး။ ဘာကှောင့မြွား ကမွ သူမွားတှနေဲ့ မတူပဲ ခုလိုမွိုး ဖှဈနရသေလဲ ဆိုတာကို ကမွအမွိုးသား ယုံအောငကြမွမှာဆေးပညာ ဗဟုသုတ မရှိတဲ့အတှကြ ကမွတို့ကို ကူညီပေးပါလို့ တောငြးခံပါရစရှငြေ့။
အဖှေ – “Medico-legal cases ဆေးပညာနဲ့ မှုခငြးဆိုငရြာ အငှငြးပှါးမှု” တှမှော သုံးနိုငတြဲ့ Virginity of female မိနြးကလေး အပွိုစဈပါတယလြို့သကသြပှဘေို့ရာ အသုံးပှုနိုငတြဲ့အခကြွ (၈) ခကွရြှိတယြ။
1. Breasts of virgin အပွိုစဈတယောကရြဲ့ ရငသြားတှဟော လုံးဝနြးပှီး တငြးနမယြေ။ အလုံးတခုကို ထကခြှမြး ခှမြးထားလိုရှိတယြ။နို့သီးထိပဖြွားကလဲ ဖှံ့ထှားမှု မပှည့စြုံသေးဘူး။ နို့ထိပအြရောငရြငြ့ အဝိုငြး အရောငကြ အသားဖှူသူတှမှော ပနြးရောငြ၊အသားရောငြ သိပမြဖှူရငြ ညိုတိုတို၊ ဒါမှမဟုတြ အသားနကရြငြ မဲနမယြေ။
2. Labia majora မ-အငျြဂါနှုတခြမြးသား အကှီးဟာ ထူမယြ၊ တငြးတငြးရငြးရငြး ရှိတယြ၊ ဆန့နြိုငြ-ကွုံ့နိုငစြှမြး ရှိမယြ။ ဘေးအနားသတကြ လုံးဝနြးတယြ။ဘယနြဲ့ညာ နှုတခြမြးသားတှကေ (ဗဂွိုငြးနား) အဝကို လုံးဝ ဖုံးထားနမယြေ။
3. Labia minora မ-အငျြဂါနှုတခြမြးသား အသေးဟာ သေးငယတြယြ၊ ပါးလပွှီး ပွော့ပှောငြးမယြ။ ထိကိုငရြငြ အာရုံခံအသိ သိပမြွားတယြ။အရောငနြုမယြ။ သူ့ကို မ-အငျြဂါနှုတခြမြးသား အကှီးကဖုံးထားမယြ။ (အရောငြ ပိုရင့သြူတှလေဲ ရှိတယြ။ လိုတာထကြ ပိုရှညြ-ပိုကှီးနသေူတှလေဲ ရှိတယြ။“Labia မ-အငျြဂါ နှုတခြမြးသား လှဘို့လိုသလား” ကို ဖတနြိုငပြါတယြ။)
4. Clitoris မ-အစိဟာ သေးငယပြှီး ပနြးရောငရြှိမယြ။ သူ့ကို မ-အငျြဂါနှုတခြမြးသား အကှီးကနေ ဖုံးအုပနြမယြေ။ (အရောငကြ တသမတတြညြး မဟုတပြါ။အရှယအြစားကလဲ သိသာသူရှိသလို သေးငယသြူလဲ ရှိတယြ။ တယောကတြညြးမှာ ဆကဆြံမှုအကှိမြ မွားရငမြွားသလို၊ အသကရြရငရြသလို ပိုကှီးလာမယြ။ဟောမြုနြး ရောဂါ ရှိရငြ ကွားအငျြဂါလို ဖှဈနမယြေ။)
5. Vaginal opening ဗဂွိုငြးနား အပေါကဝြအကယွဟြာ ၁ဝ နှဈသမီးအရှယမြှာ လကသြနြးထိပြ လောကသြာ ဝငလြိုရမယြ။အရှယရြောကြ အမွိုးသမီးဆိုရငြ လကတြခွောငြးစာလို့ ပှောနိုငတြယြ။ ရာသီသှေး ဆငြးတဲ့ အလုပကြိုသာ တာဝနထြမြးရဘူးသေးတယြ။
6. Vagina ဗဂွိုငြးနား-လှိုငခြေါငြးဟာ တငြးကှပနြမယြေ။ ကဉြွးတယြ။ မကွနြှာပှငြ ကှမြးတမြးနမယြေ။ အပေါကဝြနဲ့ သားအိမအြဝကှား အကှာအဝေးကတိုတိုလေးဘဲ ရှိမယြ။ ကှကသြားနဲ့ အရှတတြှနေဲ့ တညဆြောကြ ထားတာမို့ ဆန့နြိုငြ-ကွုံ့နိုငြ၊ ကဉြွးနိုငြ-ကယွနြိုငတြယြ။ ဒါပမေဲ့ ဒီလို တခါမှ မလုပဘြူးသေးဘဲအရိုငြးသကသြကြ ဖှဈနမယြေ။ သှေးမဆုံးခငအြထိ အရညရြှိနလေို့ အမှဲတနြးလို စိုစှပနြတယြေ။ စိုစှပမြှု မွားနခွေိနမြှာ ထိုးသှငြးမှုကို ပိုပှီး ခံနိုငရြညြ ရှိစမယြေ။)
7. Hymen အပွိုမှေးဟာ အရပှေား-အနုစား ဖှဈတယြ။ ဗဂွိုငြးနားအဝကို ဖုံးနတယြေ။ ၁ မီလီမီတာ ထူတယြ။ အလညနြရောက ပိုပါးတယြ။ပုံမှနဆြိုရငြ အပေါကငြယငြယလြေးသာ ရှိမယြ။ အပေါကပြုံစံက မတူကှ ဘူး။ ဒေါငလြိုကြ၊ အဝိုငြး၊ လခှမပြုံ၊ အနားမညီမညာ ရှိမယြ။ ဒီပုံစံအားလုံးက ပုံမှနဖြှဈပါတယြ။(တကယလြို့ ထိခိုကမြှု၊ ထိုးသှငြးမှု၊ ဆကဆြံမှု တခုခုရှိရငြ စုပပြှဲသှားမယြ။ စုပပြှဲမှုကလဲ ဒဏအြပေါမြှာ မူတညတြယြ။ ဒဏပြှငြးတာ၊ ထိုးသှငြးတဲ့အရာ ကှီးတာ၊ထိုးသှငြးမှု အရှိနြ-အကိမတြှေ အပြေါ မူတညတြယြ။ စုတပြှဲခွိနမြှာ နာမယြ။ ဒဏတြူတာဖှဈပမေဲ့ အနာခံနိုငစြှမြး မတူကှဘူး။ အတောမြွားမွား အပွိုလေးတှပဌေမအကှိမြ ဆကဆြံရငြ မကွရြညကြတွဲ့အထိ နာတယြ။ သှေးထှကမြယြ။ တကယလြို့ သေးတာ၊ နညြးတာနဲ့သာ ကှံဘူးထားရာကနေ ပိုကှီးတာ၊ပိုမွားတာနဲ့တှရေ့ငြ နဲနဲသာနာမယြ၊ နဲနာသာ သှေးထှကမြယြ၊ သှေးမထှကြ တာလဲ ဖှဈနိုငတြယြ။)
8. Fourchette commissure မ-အငျြဂါနှုတခြမြးသား အကှီးနှဈခု အောကဖြကမြှာ ဆုံတဲ့နရောကို ခေါတြယြ။ ဒီ အရပှေား-အနုစားလေးက စုပပြှဲမသှားသေးဘဲမိမှတေိုငြး ရှိနရတေယြ။ (ဒီအခကွကြ Hymen အပွိုမှေးလို အရေးပါပမေဲ့ လူပှော သိပမြမွားဘူး။ မှေးလမြးကနေ ကလေး မမှေးဘူးသူတိုငြး တငြးတငြးရငြးရငြး ရှိနတယြေ။)
အပွိုစဈပါတယလြို့ သကသြပှဘေို့ရာ “အသုံးပှုနိုငတြယြ” လို့ ပှောတာဟာ ဒါနဲ့ မကိုကရြငတြော့ မဟုတပြါဘူးလို့ ဘယသြူက အဆုံးအဖှတကြို ပေးမှာလဲ။မှနမြာပှညြ တရားခှငမြှာ ဆရာဝနတြှကေ (သိရ သလောကတြော့) ထှကခြကြွ မပေးရပါ။ ခငပြှနြးလောငြးက ထည့စြဉြးစားနိုငပြမေဲ့ ကံသကမျေမ ပှောမရလို့ ခွှငြးခကြွ ထားသင့တြယြ။ဒီလို အဆုံးအဖှတမြွိုးဟာ မိနြးကလေးတယောကရြဲ့ တကယြ့ ကိုယပြိုငြ ပိုငဆြိုငမြှု အစဈဖှဈတယြ။ ကံဆိုးသူတှမှော ဒီဝိသသဟော (မေးတဲ့သူလို) တကယ့ပြှူနာ ဖှဈစနေိုငတြယြ။
Definitions of virginity loss အပွိုရညပြကွခြှငြး အဓိပျပါယဖြှင့ဆြိုခကွမြွား
“Virginity (ဗာဂငွနြတီ) အပွိုစဈ” ဆိုတာ Sexual intercourse လိငဆြကဆြံမှု တခါမှမရှိသေးတာကို ခေါတြယြ။ လိငဆြကဆြံမှုဆိုတာ အစဉအြလာ လကခြံထားတဲ့အခကွကြတော့ Vaginal penetration with penis (ဗဂွိုငြးနား) ထဲကိုကွား-လိငအြဂြါ ထိုးသှငြးနညြးနဲ့ ဆကဆြံတာကို အလိုတူဖှဈဖှဈ၊ အလိုမတူဖှဈဖှဈ အနညြးဆုံးတကှိမရြှိဘူးတာကို ခေါတြယြ။ “Vagina-virginity (ဗဂွိုငြးနား) က (ဗားဂငြွး) ဖှဈတယြ” လို့ အတိအကခွေါတြယြ။
မေးဘို့ လိုသေးတာက ပါးစပြ သုံးနညြး တခုထဲသာ ရှိဘူးတာလား၊ စအိုနညြးတခုတညြးဆိုလဲ ထည့ရြမှာဘဲ။ ယောကြွားနဲ့ဖှဈဖှဈ Lesbians မိနြးကလေးခငြွး ဖှဈဖှဈ (မာစတာဘေးရှငြး) လုပဘြူးတာလား။ ဒီအမွိုး အစားတှသော ရှိတာကို “Physiological virginityဇီဝကမျမ-အပွိုစဈ” လို့ ခေါတြယြ။
(မာစတာဘေးရှငြး) မှာလဲ ဗဂွိုငြးနားထဲကို ထိုးသှငြးဘူးတာက ဘာနဲ့လဲ။ ဥပမာ Dildo ခေါတြဲ့ ကွား-လိငအြငျြဂါအတုကို ထည့သြှငြးဘူးတာ၊ကိုယတြိုငြ လကနြဲ့သာ (မာစတာဘေးရှငြး) လုပတြာလား။ ၂ မွိုးလုံးကိုလဲ အပွိုရညပြကွစြာရငြးထဲ ထည့သြှငြးလေ့ မရှိပါ။
အမရေိကားမှာ ၁၉၉ဝ နောကပြိုငြး “Technically virgin နညြးလမြးအရ ပှောရရငြ အပွိုပါဘဲ” ဆိုတဲ့ ဖှင့ဆြိုခကွကြ ခတစြေားလာတယြ။သမားရိုးကွ လိငဆြကဆြံမှုတော့ မပှုဘူး၊ တခှားနညြးနဲ့သာ သာယာမှု ရှာတာပါလို့ လွှောကလြဲခကွဖြှဈယြ။ အဲဒါလောကသြာ လုပတြာမို့ကမွလဲ အပွိုစာရငြး ဝငပြါတယလြို့ ပှောတာကို Virginity pledges ခေါတြယြ။ (ယေးလြ) တကျကသိုလကြ ပညာရှငြ Peter Bearman နဲ့Hannah Brueckner တို့က အဲလို အပွိုစာရငြး ဝငပြါတယလြို့ ပှောထာသူတှကေို နောကြ ၅ နှဈနတေော့ ဆနြးစဈတဲ့အခါ (STDs)လိငကြတဆငြ့ ကူးစကရြောဂါ ဖှဈနှုနြးက အဲလို မပှောသူတှနေဲ့ အတူတူဘဲ ရှိကှတာ တှရေ့ တယြ။
လိငဆြကဆြံမှု မရှိဘဲလဲ အထကကြရေးခဲ့တဲ့ အခကွတြခွို့ ပကွယြှငြး နနေိုငတြယြ။ ဥပမာ စကဘြီးစီးတာ၊ မှငြးစီးတာ၊ အားကစား ပှငြးပှငြးထံထံ လုပတြာ၊ဂွှမြးဘားကစားတာတှေ ပါတယြ။ ဒီလိုကှောငြ့ အပွိုမှေး ပေါကပြှဲမယဆြိုရငြ မိနြးကလေး ကိုယတြိုငတြာငမြှ စုပပြှဲသှားခဲ့တာကို သိခငွမြှသိမယြ။ဒီမိနြးကလေးမွိုးဟာ တကယတြနြး ယောကြွားနဲ့ ဆကဆြံတဲ့ ပဌမဆုံးအကှိမမြှာ သှေးထှကခြငွမြှ ထှကမြယြ။ ဒါမွိုးကို အပွိုရညပြကွယြှငြးတယလြို့သတမြှတတြာ တရားပါသလား။ထငမြှငခြကွတြခုက မိနြးကလေး မှေးကတညြးက အပွိုမှေး ပါမလာကော မဖှဈနိုငဘြူးလား။ ဒီထောကပြှခကွဟြာ မမှနပြါ၊
မိနြးကလေးတိုငြးမှာ မှေးကတညြးက အပွိုမှေးဟာ လုံလောကအြောငြ ရှိနနေိုငတြဲ့ အကနြွ အကှငြးတခု ဖှဈပါတယြ။Imperforatehymen အပွိုမှေး ပေါကမြနတောသာ ဖှဈနိုငတြယြ။ ဒီလိုဖှဈနသေူတိုငြးကိုတော့ Hymenotomy လုပပြေးရမယြ။တခွို့ အမွိုးသမီးတှကေ ဘယနြညြးနဲ့ ပေါကြ သှားသှား Hymenorrhaphy or Hymenoplasty ခှဲစိတနြညြးနဲ့ပှုပှငကြှပှီးသကာလ“Born again virginity ပှနလြညရြှငလြာသော အပွိုဖှဈခှငြး” လို့ ခေါကြှတယြ။
မိနြးကလေးတယောကမြှာ ယောကြွားနဲ့ ပထမဆုံး လိငဆြကဆြံမှုရှိသှားပှီဆိုတဲ့ အခကွကြို ယဉကြွေးမှု အမွားစုမှာ “ပုဂျဂိုလရြေး သမိုငြးမှတတြိုငတြရပြ” လို့အလေးအနကြ သဘောထားကှတယြ။ ဘာအဓိပျပါယြ ဆောငပြါ သလဲ။ Savingoneself ကိုယ့အြပွိုရညကြို ထိနြးထားနိုငစြှမြးရှိသူ။ Losing one’s virginityကိုယ့အြပွိုဘဝကို ပေးအပလြိုကသြူ။ Taking someone’s virginity အပွိုရညဘြဝတခုကို ရယူလိုကသြူ။ Deflowering ပနြးကောငြး အညှန့ခြွိုးခှငြး စသဖှင့သြုံးစှဲကှတယြ။ ဒီလိုဖှဈသှားသူတယောကဟြာ “ဖှူစငမြှု၊ ညကြှညမြှု၊ သန့စြဉမြှု ကုနဆြုံးသှားပှီ” လို့ တခွို့က ဆိုကှတယြ။ ဘာသာရေးတခွို့ကလဲ အဲလိုယူတာဘဲ။
တခွို့အသိုငြးအဝိုငြးတှမှော အပွိုစဈဖှဈခှငြးကို “ဂုဏတြရပြ၊ ဖှဈနိုငရြငြ အသကနြဲ့လဲပှီး ထိနြးသိမြးကာကှယရြမဲ့ ကိုယပြိုငတြနဘြိုးတရပြ” လို့ ယူဆကှတယြ။မိနြးမအငျြဂါထဲကို Tampon, Menstrual cup လို ရာသီ လာတဲ့အခါ သုံးတဲ့ပစညြး ထည့သြှငြးတာအပှငြ Medical examinations မွိုးပှါးလမြးကှောငြးထဲလကြ-ကရိယာ ထည့ပြှီး ဆေးစဈတာကိုပါ တခွို့က လကသြင့မြခံခငွကြှဘူး။ ဒီအခကွကြိုတော့ သဘောမတူပါ။
၂ နှဈအတှငြး မှေးကာစ မိနြးကလေး ၂ ယောကထြကမြနညြး မှေးကတညြးက (ဗဂွိုငြးနား) ပိတနြတောကို မိဘတှကသေိလို့ လာပှတယြ။ ထုံဆေးလေးနဲ့အပေါကငြယလြေး လုပပြေးလိုကတြယြ။ ဒီမိနြးကလေးတှကေို ဘယသြူ ဘယဝြါ ဖှဈတယလြို့ ဆရာဝနကြ သမွားမပှောပါ။ မိဘတှကလေဲ သူတို့သမီးလေးတှဒေီလို လုပထြားတယလြို့ ပှောမယြ မထငပြါ။ ဒီတော့ မိနြးကလေးတှေ ကိုယတြိုငလြဲ သိနိုငကြှမယြ မဟုတပြါ။ တခှားမှာလဲ ဒီလို လုပထြားသူတှေ ရှိပါမယြ။ဖေါကပြေးလိုကတြာက လိုတာထကြ ကယွသြှားရငြ ဒမိနြးကလေးမွိုး မငျြဂလာဦးမှာ နာတာ၊ သှေးထှကတြာ မဖှဈနိုငပြါ။အခွိနတြနပြမေဲ့ ရာသီမလာနိုငလြို့ အပွိုမှေး အပေါကပြိတတြာကို ခှဲစိတပြေးရငလြဲ ဒီလိုဘဲရှိမယြ။
အပွိုဖှဈခှငြးရဲ့ တနဘြိုးကို ငှကှေေးနဲ့ဖှတတြာဟာ ကိုယခြနျဓာကိုရငြးပှီး စီးပှါးရှာတဲ့နရောမှာ သိသာတယြ။အပွိုမဟုတသြူ တယောကရြဲ့ တညတာ သတမြှတခြကွထြကြ အပွိုတယောကကြို အနညြးဆုံး (၁ဝ) ဆ ထားလရှေိ့တယြ။ တကယတြော့တညဟာ တဘဝတာ ပှီးဆုံးခှငြးသာ ဖှဈပါတယြ။ ဂပွနမြှာ (ဂေးရှား) မယလြေးတှရေဲ့ အပွိုဘဝကိုMizuage ခေါတြဲ့ပှဲလမြးသဘငမြှာ (လော့ဒြ) တှကေ ရယူခှင့ရြှိတယြ။ ပိုကဆြံပေးရငတြော့ ခမြွးသာခှငြ့ ပေးတာလဲရှိသတဲ့။ ပုဂံခတြဦေး အရညြးကှီးတှလေဲဒီသဘော လုပခြဲ့ကှ တယြ။ စတနောနဲ့ ပညာပေးတာလို့ ဆိုပါတယြ။ ထရဝေါဒ ဗုဒျဓဘာသာနဲ့ ဘရငအြနောရြထာ ကွေးဇူးနဲ့ ပနြးဦးလှတတြဲ့ အကငွ့ပြွောကကြှယစြခေဲ့တယြ။
Proof of virginity အပွိုစဈ သကသြခေံခကြွ
တခွို့အသိုငြးအဝိုငြးတှမှော သတို့သမီးဘကကြ အပွိုစဈပါတယဆြိုတာ သကသြပှနေိုငဘြို့ လိုတယြ။ Intact hymen အပွိုမှေးရှိနတယေဆြိုတဲ့Certificate of virginity ဆရာဝနြ ထောကခြံခကြွ လိုတယြ။ ဒါမှမဟုတြ အပွိုမှေးပေါကသြှားလို့ထှကတြဲ့သှေး Nuptial blood-spotted bed sheetအိပယြာခငြးမှာ သှေးစှနြးတာ ပှရတယြ။Virginity test ဆိုတာလဲ ရှိပါတယြ။ အပွိုမှေးကို စဈဆေးတာပါဘဲ။ မတိကဘွူးလို့ အငှငြးပှါးကှပါတယြ။
၂၃-၁၁-၂ဝ၁၁ နကေ့ AI လှတငြှိမြးခမြွးသာခှငြ့ အဖှဲ့ကှီးက လူ့အခှင့အြရေး ခွိုးဖေါကတြာလို့ ထောကပြှဘူးတယြ။ ၂ဝ၁၁ အီဂစွတြောလြှနရြေးကာလမှာစဈတပကြနေ အဓမျမပှုကငွ့ခြံရတယလြို့ဆိုသူ အမွိုးသမီးတှေ ကို ထိနြးသိမြး ထားတုံးမှာVirginity test လုပခြဲ့တာကို ဝနခြံပှီး ၂၇-၁၂၂ဝ၁၁ မှာ ဒီလိုလုပတြာကိုအစိုးရက တားမှဈလိုကပြါတယြ။ ဗှိတိနမြှာလဲ လုပဘြူးသေးတယြ။
Fiancee visa သတို့သမီးလောငြး (ဗီဇာ) လို့ ခေါတြယြ။ ၁၉၇၉ ဇနျနဝါရီလထဲမှာ မငျြဂလာဆောငဘြို့ဝငလြာသူ အမွိုးသမီးတယောကကြိုVirginity test လုပစြခေဲ့တယြ။ နောကတြော့ ပှငလြိုကပြါတယြ။အိနျဒိယမှာလဲ အဓမျမ ကငွ့ခြံရပါတယလြို့ ပှောသူတိုငြးကို ဒီလိုဆေးစဈတာမွိုး ၂၉-၁-၂ဝ၁၂ နအေ့ထိ လုပခြဲ့တယြ။
အပွိုမှေးစဈတာအပှငြ Laxity of vaginal muscles ဗဂွိုငြးနား ကှကသြားတှေ တငြးမာမှုအခှအနေကေို လကြ ၂ ခွောငြးစမြးသပနြညြးနဲ့ လုပတြယြ။ရုပရြှငတြကားမှာ ပါတယြ။ဒီနညြးက တိကမွှု မရှိတာ ကိုလဲ ငှငြးကှပါတယြ။ အာဖရိက နိုငငြံခွို့မှာ ငယငြယကြလေးကတညြးက မ-အငျြဂါ နှုတခြမြးသားအကှီးနှဈခုကို ဆှဲခွုပပြေးတာကို Infibulation ခေါတြယြ။ မငျြဂလာမဆောငခြငြ ခွုပကြှိုး အစဈခံကှရတယြ။ ဒီအလအေ့ကငွ့မြွိုးတှကေို ခတမြေီသူတှကေ ရှုတခြကွှတယြ။ဒါပမေဲ့ ၂ဝဝ၄မှာ (ဇငဘြာဘှေ) ခေါငြးဆောငတြဦးက ဒီလိုလုပတြာကှောငြ့ HIV ကူးစကတြာကို သကသြာစတယေလြို့ ပှောတော့ မငှငြးနိုငကြှဘူး။
အမွိုးသမီး အမွားစုဟာ ယောကြွားနဲ့ ပထမဆုံး လိငဆြကဆြံရငြ
– အပွိုမှေးပေါကသြှားလို့ သှေးထှကမြယြ၊ ၁-၃ ရကအြထိ နညြးနညြးထှကမြယြ။
– မ-အငျြဂါ ဖူးရောငနြမယြေ၊ ၁-၃ ရကကြှာ နာနမယြေ။
– ၃ ရကထြကြ ပိုကှာနရငြေ၊ သှေးဆငြးတာလဲ မွားမယဆြိုရငြ ဆရာဝနပြှပါ။
“Romantic love စိတလြှုတရြှားမှုက ရတဲ့အခစြွ နဲ့ Sexual jealousy လိငပြိုငြးဆိုငရြာ သဝနတြိုမှုဟာ Universal features of human relationships နရောတကာမှာ မှနကြနတြဲ့ လူမှုဆကဆြံရေး ဖှဈတယြ” လို့ ဆိုရှယြ-စိတျတဗဒေ ပညာရှငတှကေ ဆိုကှပါတယြ။
အမေး – ကျမတို့ လင်မယားနှစ်ယောက်မှာ ပြဿနာတစ်ခု တက်နေပါတယ်ရှင့်။ ကျမက အခုအသက်၂၃ နှစ်ရှိပါပြီရှင့်။
ကျမတို့ မိန်းကလေး သဘာဝအရ ယောက်ျားလေးနဲ့ စပြီး နေတဲ့နေ့မှာ သွေးကျရမယ်လို့ ကျမအမျိူးသားက ပြောပါတယ်။ကျမ အဲလိုသွေးမကျဘူးတဲ့။ အဲဒါကြောင့် ကျမကို အပျို မစစ်ဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ ပြီးတော့ ဘယ်သူနဲ့ ဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုပြီးနေ့စဉ် အဲဒါကိုပဲ ပြဿနာလုပ်နေပါတယ်။ အမှန်တကယ်ကို ကျမသူနဲ့မရခင် ဘယ်သူနဲ့မှ ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ သူ့ကို ပြောပြတော့လဲသူကကျမကို မယုံပေးပါဘူး။ ဘာကြောင့်များ ကျမ သူများတွေနဲ့ မတူပဲ ခုလိုမျိုး ဖြစ်နေရသလဲ ဆိုတာကို ကျမအမျိုးသား ယုံအောင်ကျမမှာဆေးပညာ ဗဟုသုတ မရှိတဲ့အတွက် ကျမတို့ကို ကူညီပေးပါလို့ တောင်းခံပါရစေရှင့်။
အဖြေ – “Medico-legal cases ဆေးပညာနဲ့ မှုခင်းဆိုင်ရာ အငြင်းပွါးမှု” တွေမှာ သုံးနိုင်တဲ့ Virginity of female မိန်းကလေး အပျိုစစ်ပါတယ်လို့သက်သေပြဘို့ရာ အသုံးပြုနိုင်တဲ့အချက် (၈) ချက်ရှိတယ်။
1. Breasts of virgin အပျိုစစ်တယောက်ရဲ့ ရင်သားတွေဟာ လုံးဝန်းပြီး တင်းနေမယ်။ အလုံးတခုကို ထက်ခြမ်း ခြမ်းထားလိုရှိတယ်။နို့သီးထိပ်ဖျားကလဲ ဖွံ့ထွားမှု မပြည့်စုံသေးဘူး။ နို့ထိပ်အရောင်ရင့် အဝိုင်း အရောင်က အသားဖြူသူတွေမှာ ပန်းရောင်၊အသားရောင် သိပ်မဖြူရင် ညိုတိုတို၊ ဒါမှမဟုတ် အသားနက်ရင် မဲနေမယ်။
2. Labia majora မ-အင်္ဂါနှုတ်ခမ်းသား အကြီးဟာ ထူမယ်၊ တင်းတင်းရင်းရင်း ရှိတယ်၊ ဆန့်နိုင်-ကျုံ့နိုင်စွမ်း ရှိမယ်။ ဘေးအနားသတ်က လုံးဝန်းတယ်။ဘယ်နဲ့ညာ နှုတ်ခမ်းသားတွေက (ဗဂျိုင်းနား) အဝကို လုံးဝ ဖုံးထားနေမယ်။
3. Labia minora မ-အင်္ဂါနှုတ်ခမ်းသား အသေးဟာ သေးငယ်တယ်၊ ပါးလျပြီး ပျော့ပြောင်းမယ်။ ထိကိုင်ရင် အာရုံခံအသိ သိပ်များတယ်။အရောင်နုမယ်။ သူ့ကို မ-အင်္ဂါနှုတ်ခမ်းသား အကြီးကဖုံးထားမယ်။ (အရောင် ပိုရင့်သူတွေလဲ ရှိတယ်။ လိုတာထက် ပိုရှည်-ပိုကြီးနေသူတွေလဲ ရှိတယ်။“Labia မ-အင်္ဂါ နှုတ်ခမ်းသား လှဘို့လိုသလား” ကို ဖတ်နိုင်ပါတယ်။)
4. Clitoris မ-အစိဟာ သေးငယ်ပြီး ပန်းရောင်ရှိမယ်။ သူ့ကို မ-အင်္ဂါနှုတ်ခမ်းသား အကြီးကနေ ဖုံးအုပ်နေမယ်။ (အရောင်က တသမတ်တည်း မဟုတ်ပါ။အရွယ်အစားကလဲ သိသာသူရှိသလို သေးငယ်သူလဲ ရှိတယ်။ တယောက်တည်းမှာ ဆက်ဆံမှုအကြိမ် များရင်များသလို၊ အသက်ရရင်ရသလို ပိုကြီးလာမယ်။ဟော်မုန်း ရောဂါ ရှိရင် ကျားအင်္ဂါလို ဖြစ်နေမယ်။)
5. Vaginal opening ဗဂျိုင်းနား အပေါက်ဝအကျယ်ဟာ ၁ဝ နှစ်သမီးအရွယ်မှာ လက်သန်းထိပ် လောက်သာ ဝင်လိုရမယ်။အရွယ်ရောက် အမျိုးသမီးဆိုရင် လက်တချောင်းစာလို့ ပြောနိုင်တယ်။ ရာသီသွေး ဆင်းတဲ့ အလုပ်ကိုသာ တာဝန်ထမ်းရဘူးသေးတယ်။
6. Vagina ဗဂျိုင်းနား-လှိုင်ခေါင်းဟာ တင်းကြပ်နေမယ်။ ကျဉ်းတယ်။ မျက်နှာပြင် ကြမ်းတမ်းနေမယ်။ အပေါက်ဝနဲ့ သားအိမ်အဝကြား အကွာအဝေးကတိုတိုလေးဘဲ ရှိမယ်။ ကြွက်သားနဲ့ အရွတ်တွေနဲ့ တည်ဆောက် ထားတာမို့ ဆန့်နိုင်-ကျုံ့နိုင်၊ ကျဉ်းနိုင်-ကျယ်နိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီလို တခါမှ မလုပ်ဘူးသေးဘဲအရိုင်းသက်သက် ဖြစ်နေမယ်။ သွေးမဆုံးခင်အထိ အရည်ရှိနေလို့ အမြဲတန်းလို စိုစွပ်နေတယ်။ စိုစွပ်မှု များနေချိန်မှာ ထိုးသွင်းမှုကို ပိုပြီး ခံနိုင်ရည် ရှိစေမယ်။)
7. Hymen အပျိုမှေးဟာ အရေပြား-အနုစား ဖြစ်တယ်။ ဗဂျိုင်းနားအဝကို ဖုံးနေတယ်။ ၁ မီလီမီတာ ထူတယ်။ အလည်နေရာက ပိုပါးတယ်။ပုံမှန်ဆိုရင် အပေါက်ငယ်ငယ်လေးသာ ရှိမယ်။ အပေါက်ပုံစံက မတူကြ ဘူး။ ဒေါင်လိုက်၊ အဝိုင်း၊ လခြမ်ပုံ၊ အနားမညီမညာ ရှိမယ်။ ဒီပုံစံအားလုံးက ပုံမှန်ဖြစ်ပါတယ်။(တကယ်လို့ ထိခိုက်မှု၊ ထိုးသွင်းမှု၊ ဆက်ဆံမှု တခုခုရှိရင် စုပ်ပြဲသွားမယ်။ စုပ်ပြဲမှုကလဲ ဒဏ်အပေါ်မှာ မူတည်တယ်။ ဒဏ်ပြင်းတာ၊ ထိုးသွင်းတဲ့အရာ ကြီးတာ၊ထိုးသွင်းမှု အရှိန်-အကိမ်တွေ အပေါ် မူတည်တယ်။ စုတ်ပြဲချိန်မှာ နာမယ်။ ဒဏ်တူတာဖြစ်ပေမဲ့ အနာခံနိုင်စွမ်း မတူကြဘူး။ အတော်များများ အပျိုလေးတွေပဌမအကြိမ် ဆက်ဆံရင် မျက်ရည်ကျတဲ့အထိ နာတယ်။ သွေးထွက်မယ်။ တကယ်လို့ သေးတာ၊ နည်းတာနဲ့သာ ကြံဘူးထားရာကနေ ပိုကြီးတာ၊ပိုများတာနဲ့တွေ့ရင် နဲနဲသာနာမယ်၊ နဲနာသာ သွေးထွက်မယ်၊ သွေးမထွက် တာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။)
အပျိုစစ်ပါတယ်လို့ သက်သေပြဘို့ရာ “အသုံးပြုနိုင်တယ်” လို့ ပြောတာဟာ ဒါနဲ့ မကိုက်ရင်တော့ မဟုတ်ပါဘူးလို့ ဘယ်သူက အဆုံးအဖြတ်ကို ပေးမှာလဲ။မြန်မာပြည် တရားခွင်မှာ ဆရာဝန်တွေက (သိရ သလောက်တော့) ထွက်ချက် မပေးရပါ။ ခင်ပွန်းလောင်းက ထည့်စဉ်းစားနိုင်ပေမဲ့ ကံသေကမ္မ ပြောမရလို့ ချွင်းချက် ထားသင့်တယ်။ဒီလို အဆုံးအဖြတ်မျိုးဟာ မိန်းကလေးတယောက်ရဲ့ တကယ့် ကိုယ်ပိုင် ပိုင်ဆိုင်မှု အစစ်ဖြစ်တယ်။ ကံဆိုးသူတွေမှာ ဒီဝိသေသဟာ (မေးတဲ့သူလို) တကယ့်ပြဿနာ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။
“Virginity (ဗာဂျင်နတီ) အပျိုစစ်” ဆိုတာ Sexual intercourse လိင်ဆက်ဆံမှု တခါမှမရှိသေးတာကို ခေါ်တယ်။ လိင်ဆက်ဆံမှုဆိုတာ အစဉ်အလာ လက်ခံထားတဲ့အချက်ကတော့ Vaginal penetration with penis (ဗဂျိုင်းနား) ထဲကိုကျား-လိင်အဂ်ါ ထိုးသွင်းနည်းနဲ့ ဆက်ဆံတာကို အလိုတူဖြစ်ဖြစ်၊ အလိုမတူဖြစ်ဖြစ် အနည်းဆုံးတကြိမ်ရှိဘူးတာကို ခေါ်တယ်။ “Vagina-virginity (ဗဂျိုင်းနား) က (ဗားဂျင်း) ဖြစ်တယ်” လို့ အတိအကျခေါ်တယ်။
(မာစတာဘေးရှင်း) မှာလဲ ဗဂျိုင်းနားထဲကို ထိုးသွင်းဘူးတာက ဘာနဲ့လဲ။ ဥပမာ Dildo ခေါ်တဲ့ ကျား-လိင်အင်္ဂါအတုကို ထည့်သွင်းဘူးတာ၊ကိုယ်တိုင် လက်နဲ့သာ (မာစတာဘေးရှင်း) လုပ်တာလား။ ၂ မျိုးလုံးကိုလဲ အပျိုရည်ပျက်စာရင်းထဲ ထည့်သွင်းလေ့ မရှိပါ။
အမေရိကားမှာ ၁၉၉ဝ နောက်ပိုင်း “Technically virgin နည်းလမ်းအရ ပြောရရင် အပျိုပါဘဲ” ဆိုတဲ့ ဖွင့်ဆိုချက်က ခေတ်စားလာတယ်။သမားရိုးကျ လိင်ဆက်ဆံမှုတော့ မပြုဘူး၊ တခြားနည်းနဲ့သာ သာယာမှု ရှာတာပါလို့ လျှောက်လဲချက်ဖြစ်ယ်။ အဲဒါလောက်သာ လုပ်တာမို့ကျမလဲ အပျိုစာရင်း ဝင်ပါတယ်လို့ ပြောတာကို Virginity pledges ခေါ်တယ်။ (ယေးလ်) တက္ကသိုလ်က ပညာရှင် Peter Bearman နဲ့Hannah Brueckner တို့က အဲလို အပျိုစာရင်း ဝင်ပါတယ်လို့ ပြောထာသူတွေကို နောက် ၅ နှစ်နေတော့ ဆန်းစစ်တဲ့အခါ (STDs)လိင်ကတဆင့် ကူးစက်ရောဂါ ဖြစ်နှုန်းက အဲလို မပြောသူတွေနဲ့ အတူတူဘဲ ရှိကြတာ တွေ့ရ တယ်။
လိင်ဆက်ဆံမှု မရှိဘဲလဲ အထက်ကရေးခဲ့တဲ့ အချက်တချို့ ပျက်ယွင်း နေနိုင်တယ်။ ဥပမာ စက်ဘီးစီးတာ၊ မြင်းစီးတာ၊ အားကစား ပြင်းပြင်းထံထံ လုပ်တာ၊ဂျွမ်းဘားကစားတာတွေ ပါတယ်။ ဒီလိုကြောင့် အပျိုမှေး ပေါက်ပြဲမယ်ဆိုရင် မိန်းကလေး ကိုယ်တိုင်တာင်မှ စုပ်ပြဲသွားခဲ့တာကို သိချင်မှသိမယ်။ဒီမိန်းကလေးမျိုးဟာ တကယ်တန်း ယောက်ျားနဲ့ ဆက်ဆံတဲ့ ပဌမဆုံးအကြိမ်မှာ သွေးထွက်ချင်မှ ထွက်မယ်။ ဒါမျိုးကို အပျိုရည်ပျက်ယွင်းတယ်လို့သတ်မှတ်တာ တရားပါသလား။ထင်မြင်ချက်တခုက မိန်းကလေး မွေးကတည်းက အပျိုမှေး ပါမလာကော မဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ ဒီထောက်ပြချက်ဟာ မမှန်ပါ၊
မိန်းကလေးတိုင်းမှာ မွေးကတည်းက အပျိုမှေးဟာ လုံလောက်အောင် ရှိနေနိုင်တဲ့ အကျန် အကြွင်းတခု ဖြစ်ပါတယ်။Imperforatehymen အပျိုမှေး ပေါက်မနေတာသာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒီလိုဖြစ်နေသူတိုင်းကိုတော့ Hymenotomy လုပ်ပေးရမယ်။တချို့ အမျိုးသမီးတွေက ဘယ်နည်းနဲ့ ပေါက် သွားသွား Hymenorrhaphy or Hymenoplasty ခွဲစိတ်နည်းနဲ့ပြုပြင်ကြပြီးသကာလ“Born again virginity ပြန်လည်ရှင်လာသော အပျိုဖြစ်ခြင်း” လို့ ခေါ်ကြတယ်။
မိန်းကလေးတယောက်မှာ ယောက်ျားနဲ့ ပထမဆုံး လိင်ဆက်ဆံမှုရှိသွားပြီဆိုတဲ့ အချက်ကို ယဉ်ကျေးမှု အများစုမှာ “ပုဂ္ဂိုလ်ရေး သမိုင်းမှတ်တိုင်တရပ်” လို့အလေးအနက် သဘောထားကြတယ်။ ဘာအဓိပ္ပါယ် ဆောင်ပါ သလဲ။ Savingoneself ကိုယ့်အပျိုရည်ကို ထိန်းထားနိုင်စွမ်းရှိသူ။ Losing one’s virginityကိုယ့်အပျိုဘဝကို ပေးအပ်လိုက်သူ။ Taking someone’s virginity အပျိုရည်ဘဝတခုကို ရယူလိုက်သူ။ Deflowering ပန်းကောင်း အညွန့်ချိုးခြင်း စသဖြင့်သုံးစွဲကြတယ်။ ဒီလိုဖြစ်သွားသူတယောက်ဟာ “ဖြူစင်မှု၊ ည်ကြည်မှု၊ သန့်စဉ်မှု ကုန်ဆုံးသွားပြီ” လို့ တချို့က ဆိုကြတယ်။ ဘာသာရေးတချို့ကလဲ အဲလိုယူတာဘဲ။
တချို့အသိုင်းအဝိုင်းတွေမှာ အပျိုစစ်ဖြစ်ခြင်းကို “ဂုဏ်တရပ်၊ ဖြစ်နိုင်ရင် အသက်နဲ့လဲပြီး ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရမဲ့ ကိုယ်ပိုင်တန်ဘိုးတရပ်” လို့ ယူဆကြတယ်။မိန်းမအင်္ဂါထဲကို Tampon, Menstrual cup လို ရာသီ လာတဲ့အခါ သုံးတဲ့ပစည်း ထည့်သွင်းတာအပြင် Medical examinations မျိုးပွါးလမ်းကြောင်းထဲလက်-ကရိယာ ထည့်ပြီး ဆေးစစ်တာကိုပါ တချို့က လက်သင့်မခံချင်ကြဘူး။ ဒီအချက်ကိုတော့ သဘောမတူပါ။
၂ နှစ်အတွင်း မွေးကာစ မိန်းကလေး ၂ ယောက်ထက်မနည်း မွေးကတည်းက (ဗဂျိုင်းနား) ပိတ်နေတာကို မိဘတွေကသိလို့ လာပြတယ်။ ထုံဆေးလေးနဲ့အပေါက်ငယ်လေး လုပ်ပေးလိုက်တယ်။ ဒီမိန်းကလေးတွေကို ဘယ်သူ ဘယ်ဝါ ဖြစ်တယ်လို့ ဆရာဝန်က သများမပြောပါ။ မိဘတွေကလဲ သူတို့သမီးလေးတွေဒီလို လုပ်ထားတယ်လို့ ပြောမယ် မထင်ပါ။ ဒီတော့ မိန်းကလေးတွေ ကိုယ်တိုင်လဲ သိနိုင်ကြမယ် မဟုတ်ပါ။ တခြားမှာလဲ ဒီလို လုပ်ထားသူတွေ ရှိပါမယ်။ဖေါက်ပေးလိုက်တာက လိုတာထက် ကျယ်သွားရင် ဒမိန်းကလေးမျိုး မင်္ဂလာဦးမှာ နာတာ၊ သွေးထွက်တာ မဖြစ်နိုင်ပါ။အချိန်တန်ပေမဲ့ ရာသီမလာနိုင်လို့ အပျိုမှေး အပေါက်ပိတ်တာကို ခွဲစိတ်ပေးရင်လဲ ဒီလိုဘဲရှိမယ်။
အပျိုဖြစ်ခြင်းရဲ့ တန်ဘိုးကို ငွေကြေးနဲ့ဖြတ်တာဟာ ကိုယ်ခန္ဓာကိုရင်းပြီး စီးပွါးရှာတဲ့နေရာမှာ သိသာတယ်။အပျိုမဟုတ်သူ တယောက်ရဲ့ တညတာ သတ်မှတ်ချက်ထက် အပျိုတယောက်ကို အနည်းဆုံး (၁ဝ) ဆ ထားလေ့ရှိတယ်။ တကယ်တော့တညဟာ တဘဝတာ ပြီးဆုံးခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျပန်မှာ (ဂေးရှား) မယ်လေးတွေရဲ့ အပျိုဘဝကိုMizuage ခေါ်တဲ့ပွဲလမ်းသဘင်မှာ (လော့ဒ်) တွေက ရယူခွင့်ရှိတယ်။ ပိုက်ဆံပေးရင်တော့ ချမ်းသာခွင့် ပေးတာလဲရှိသတဲ့။ ပုဂံခေတ်ဦး အရည်းကြီးတွေလဲဒီသဘော လုပ်ခဲ့ကြ တယ်။ စေတနာနဲ့ ပညာပေးတာလို့ ဆိုပါတယ်။ ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ ဘရင်အနော်ရထာ ကျေးဇူးနဲ့ ပန်းဦးလွှတ်တဲ့ အကျင့်ပျောက်ကွယ်စေခဲ့တယ်။
Fiancee visa သတို့သမီးလောင်း (ဗီဇာ) လို့ ခေါ်တယ်။ ၁၉၇၉ ဇန္နဝါရီလထဲမှာ မင်္ဂလာဆောင်ဘို့ဝင်လာသူ အမျိုးသမီးတယောက်ကိုVirginity test လုပ်စေခဲ့တယ်။ နောက်တော့ ပြင်လိုက်ပါတယ်။အိန္ဒိယမှာလဲ အဓမ္မ ကျင့်ခံရပါတယ်လို့ ပြောသူတိုင်းကို ဒီလိုဆေးစစ်တာမျိုး ၂၉-၁-၂ဝ၁၂ နေ့အထိ လုပ်ခဲ့တယ်။
အပျိုမှေးစစ်တာအပြင် Laxity of vaginal muscles ဗဂျိုင်းနား ကြွက်သားတွေ တင်းမာမှုအခြေအနေကို လက် ၂ ချောင်းစမ်းသပ်နည်းနဲ့ လုပ်တယ်။ရုပ်ရှင်တကားမှာ ပါတယ်။ဒီနည်းက တိကျမှု မရှိတာ ကိုလဲ ငြင်းကြပါတယ်။ အာဖရိက နိုင်ငံချို့မှာ ငယ်ငယ်ကလေးကတည်းက မ-အင်္ဂါ နှုတ်ခမ်းသားအကြီးနှစ်ခုကို ဆွဲချုပ်ပေးတာကို Infibulation ခေါ်တယ်။ မင်္ဂလာမဆောင်ခင် ချုပ်ကြိုး အစစ်ခံကြရတယ်။ ဒီအလေ့အကျင့်မျိုးတွေကို ခေတ်မီသူတွေက ရှုတ်ချကြတယ်။ဒါပေမဲ့ ၂ဝဝ၄မှာ (ဇင်ဘာဘွေ) ခေါင်းဆောင်တဦးက ဒီလိုလုပ်တာကြောင့် HIV ကူးစက်တာကို သက်သာစေတယ်လို့ ပြောတော့ မငြင်းနိုင်ကြဘူး။
“Romantic love စိတ်လှုတ်ရှားမှုက ရတဲ့အချစ် နဲ့ Sexual jealousy လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ သဝန်တိုမှုဟာ Universal features of human relationships နေရာတကာမှာ မှန်ကန်တဲ့ လူမှုဆက်ဆံရေး ဖြစ်တယ်” လို့ ဆိုရှယ်-စိတ္တဗေဒ ပညာရှငတွေက ဆိုကြပါတယ်။
အမေး – ကမြတို့ လငျမယားနှဈယောကျမှာ ပွူနာတဈခု တကျနပေါတယျရှငျ့။ ကမြက အခုအသကျ၂၃ နှဈရှိပါပွီရှငျ့။
ကမြတို့ မိနျးကလေး သဘာဝအရ ယောကျြားလေးနဲ့ စပွီး နတေဲ့နေ့မှာ သှေးကရြမယျလို့ ကမြအမြိူးသားက ပွောပါတယျ။ကမြ အဲလိုသှေးမကဘြူးတဲ့။ အဲဒါကွောငျ့ ကမြကို အပြို မစဈဘူးလို့ ပွောပါတယျ။ ပွီးတော့ ဘယျသူနဲ့ ဘာလုပျခဲ့လဲဆိုပွီးနေ့စဉျ အဲဒါကိုပဲ ပွူနာလုပျနပေါတယျ။ အမှနျတကယျကို ကမြသူနဲ့မရခငျ ဘယျသူနဲ့မှ ဘာမှမဖွဈခဲ့ပါဘူး။ သူ့ကို ပွောပွတော့လဲသူကကမြကို မယုံပေးပါဘူး။ ဘာကွောငျ့မြား ကမြ သူမြားတှနေဲ့ မတူပဲ ခုလိုမြိုး ဖွဈနရေသလဲ ဆိုတာကို ကမြအမြိုးသား ယုံအောငျကမြမှာဆေးပညာ ဗဟုသုတ မရှိတဲ့အတှကျ ကမြတို့ကို ကူညီပေးပါလို့ တောငျးခံပါရစရှေငျ့။
အဖွေ – “Medico-legal cases ဆေးပညာနဲ့ မှုခငျးဆိုငျရာ အငွငျးပှါးမှု” တှမှော သုံးနိုငျတဲ့ Virginity of female မိနျးကလေး အပြိုစဈပါတယျလို့သကျသပွေဘို့ရာ အသုံးပွုနိုငျတဲ့အခကျြ (၈) ခကျြရှိတယျ။
1. Breasts of virgin အပြိုစဈတယောကျရဲ့ ရငျသားတှဟော လုံးဝနျးပွီး တငျးနမေယျ။ အလုံးတခုကို ထကျခွမျး ခွမျးထားလိုရှိတယျ။နို့သီးထိပျဖြားကလဲ ဖှံ့ထှားမှု မပွညျ့စုံသေးဘူး။ နို့ထိပျအရောငျရငျ့ အဝိုငျး အရောငျက အသားဖွူသူတှမှော ပနျးရောငျ၊အသားရောငျ သိပျမဖွူရငျ ညိုတိုတို၊ ဒါမှမဟုတျ အသားနကျရငျ မဲနမေယျ။
2. Labia majora မ-အင်ျဂါနှုတျခမျးသား အကွီးဟာ ထူမယျ၊ တငျးတငျးရငျးရငျး ရှိတယျ၊ ဆနျ့နိုငျ-ကြုံ့နိုငျစှမျး ရှိမယျ။ ဘေးအနားသတျက လုံးဝနျးတယျ။ဘယျနဲ့ညာ နှုတျခမျးသားတှကေ (ဗဂြိုငျးနား) အဝကို လုံးဝ ဖုံးထားနမေယျ။
3. Labia minora မ-အင်ျဂါနှုတျခမျးသား အသေးဟာ သေးငယျတယျ၊ ပါးလပြွီး ပြော့ပွောငျးမယျ။ ထိကိုငျရငျ အာရုံခံအသိ သိပျမြားတယျ။အရောငျနုမယျ။ သူ့ကို မ-အင်ျဂါနှုတျခမျးသား အကွီးကဖုံးထားမယျ။ (အရောငျ ပိုရငျ့သူတှလေဲ ရှိတယျ။ လိုတာထကျ ပိုရှညျ-ပိုကွီးနသေူတှလေဲ ရှိတယျ။“Labia မ-အင်ျဂါ နှုတျခမျးသား လှဘို့လိုသလား” ကို ဖတျနိုငျပါတယျ။)
4. Clitoris မ-အစိဟာ သေးငယျပွီး ပနျးရောငျရှိမယျ။ သူ့ကို မ-အင်ျဂါနှုတျခမျးသား အကွီးကနေ ဖုံးအုပျနမေယျ။ (အရောငျက တသမတျတညျး မဟုတျပါ။အရှယျအစားကလဲ သိသာသူရှိသလို သေးငယျသူလဲ ရှိတယျ။ တယောကျတညျးမှာ ဆကျဆံမှုအကွိမျ မြားရငျမြားသလို၊ အသကျရရငျရသလို ပိုကွီးလာမယျ။ဟျောမုနျး ရောဂါ ရှိရငျ ကြားအင်ျဂါလို ဖွဈနမေယျ။)
5. Vaginal opening ဗဂြိုငျးနား အပေါကျဝအကယျြဟာ ၁ဝ နှဈသမီးအရှယျမှာ လကျသနျးထိပျ လောကျသာ ဝငျလိုရမယျ။အရှယျရောကျ အမြိုးသမီးဆိုရငျ လကျတခြောငျးစာလို့ ပွောနိုငျတယျ။ ရာသီသှေး ဆငျးတဲ့ အလုပျကိုသာ တာဝနျထမျးရဘူးသေးတယျ။
6. Vagina ဗဂြိုငျးနား-လှိုငျခေါငျးဟာ တငျးကွပျနမေယျ။ ကဉျြးတယျ။ မကျြနှာပွငျ ကွမျးတမျးနမေယျ။ အပေါကျဝနဲ့ သားအိမျအဝကွား အကှာအဝေးကတိုတိုလေးဘဲ ရှိမယျ။ ကွှကျသားနဲ့ အရှတျတှနေဲ့ တညျဆောကျ ထားတာမို့ ဆနျ့နိုငျ-ကြုံ့နိုငျ၊ ကဉျြးနိုငျ-ကယျြနိုငျတယျ။ ဒါပမေဲ့ ဒီလို တခါမှ မလုပျဘူးသေးဘဲအရိုငျးသကျသကျ ဖွဈနမေယျ။ သှေးမဆုံးခငျအထိ အရညျရှိနလေို့ အမွဲတနျးလို စိုစှပျနတေယျ။ စိုစှပျမှု မြားနခြေိနျမှာ ထိုးသှငျးမှုကို ပိုပွီး ခံနိုငျရညျ ရှိစမေယျ။)
7. Hymen အပြိုမှေးဟာ အရပွေား-အနုစား ဖွဈတယျ။ ဗဂြိုငျးနားအဝကို ဖုံးနတေယျ။ ၁ မီလီမီတာ ထူတယျ။ အလညျနရောက ပိုပါးတယျ။ပုံမှနျဆိုရငျ အပေါကျငယျငယျလေးသာ ရှိမယျ။ အပေါကျပုံစံက မတူကွ ဘူး။ ဒေါငျလိုကျ၊ အဝိုငျး၊ လခွမျပုံ၊ အနားမညီမညာ ရှိမယျ။ ဒီပုံစံအားလုံးက ပုံမှနျဖွဈပါတယျ။(တကယျလို့ ထိခိုကျမှု၊ ထိုးသှငျးမှု၊ ဆကျဆံမှု တခုခုရှိရငျ စုပျပွဲသှားမယျ။ စုပျပွဲမှုကလဲ ဒဏျအပျေါမှာ မူတညျတယျ။ ဒဏျပွငျးတာ၊ ထိုးသှငျးတဲ့အရာ ကွီးတာ၊ထိုးသှငျးမှု အရှိနျ-အကိမျတှေ အပျေါ မူတညျတယျ။ စုတျပွဲခြိနျမှာ နာမယျ။ ဒဏျတူတာဖွဈပမေဲ့ အနာခံနိုငျစှမျး မတူကွဘူး။ အတျောမြားမြား အပြိုလေးတှပေဌမအကွိမျ ဆကျဆံရငျ မကျြရညျကတြဲ့အထိ နာတယျ။ သှေးထှကျမယျ။ တကယျလို့ သေးတာ၊ နညျးတာနဲ့သာ ကွံဘူးထားရာကနေ ပိုကွီးတာ၊ပိုမြားတာနဲ့တှေ့ရငျ နဲနဲသာနာမယျ၊ နဲနာသာ သှေးထှကျမယျ၊ သှေးမထှကျ တာလဲ ဖွဈနိုငျတယျ။)
8. Fourchette commissure မ-အင်ျဂါနှုတျခမျးသား အကွီးနှဈခု အောကျဖကျမှာ ဆုံတဲ့နရောကို ချေါတယျ။ ဒီ အရပွေား-အနုစားလေးက စုပျပွဲမသှားသေးဘဲမိမှတေိုငျး ရှိနရေတယျ။ (ဒီအခကျြက Hymen အပြိုမှေးလို အရေးပါပမေဲ့ လူပွော သိပျမမြားဘူး။ မှေးလမျးကနေ ကလေး မမှေးဘူးသူတိုငျး တငျးတငျးရငျးရငျး ရှိနတေယျ။)
အပြိုစဈပါတယျလို့ သကျသပွေဘို့ရာ “အသုံးပွုနိုငျတယျ” လို့ ပွောတာဟာ ဒါနဲ့ မကိုကျရငျတော့ မဟုတျပါဘူးလို့ ဘယျသူက အဆုံးအဖွတျကို ပေးမှာလဲ။မွနျမာပွညျ တရားခှငျမှာ ဆရာဝနျတှကေ (သိရ သလောကျတော့) ထှကျခကျြ မပေးရပါ။ ခငျပှနျးလောငျးက ထညျ့စဉျးစားနိုငျပမေဲ့ ကံသကေမ်မ ပွောမရလို့ ခြှငျးခကျြ ထားသငျ့တယျ။ဒီလို အဆုံးအဖွတျမြိုးဟာ မိနျးကလေးတယောကျရဲ့ တကယျ့ ကိုယျပိုငျ ပိုငျဆိုငျမှု အစဈဖွဈတယျ။ ကံဆိုးသူတှမှော ဒီဝိသသေဟာ (မေးတဲ့သူလို) တကယျ့ပွူနာ ဖွဈစနေိုငျတယျ။
Definitions of virginity loss အပြိုရညျပကျြခွငျး အဓိပ်ပါယျဖှငျ့ဆိုခကျြမြား
“Virginity (ဗာဂငျြနတီ) အပြိုစဈ” ဆိုတာ Sexual intercourse လိငျဆကျဆံမှု တခါမှမရှိသေးတာကို ချေါတယျ။ လိငျဆကျဆံမှုဆိုတာ အစဉျအလာ လကျခံထားတဲ့အခကျြကတော့ Vaginal penetration with penis (ဗဂြိုငျးနား) ထဲကိုကြား-လိငျအဂျါ ထိုးသှငျးနညျးနဲ့ ဆကျဆံတာကို အလိုတူဖွဈဖွဈ၊ အလိုမတူဖွဈဖွဈ အနညျးဆုံးတကွိမျရှိဘူးတာကို ချေါတယျ။ “Vagina-virginity (ဗဂြိုငျးနား) က (ဗားဂငျြး) ဖွဈတယျ” လို့ အတိအကခြျေါတယျ။
မေးဘို့ လိုသေးတာက ပါးစပျ သုံးနညျး တခုထဲသာ ရှိဘူးတာလား၊ စအိုနညျးတခုတညျးဆိုလဲ ထညျ့ရမှာဘဲ။ ယောကျြားနဲ့ဖွဈဖွဈ Lesbians မိနျးကလေးခငျြး ဖွဈဖွဈ (မာစတာဘေးရှငျး) လုပျဘူးတာလား။ ဒီအမြိုး အစားတှသော ရှိတာကို “Physiological virginityဇီဝကမ်မ-အပြိုစဈ” လို့ ချေါတယျ။
(မာစတာဘေးရှငျး) မှာလဲ ဗဂြိုငျးနားထဲကို ထိုးသှငျးဘူးတာက ဘာနဲ့လဲ။ ဥပမာ Dildo ချေါတဲ့ ကြား-လိငျအင်ျဂါအတုကို ထညျ့သှငျးဘူးတာ၊ကိုယျတိုငျ လကျနဲ့သာ (မာစတာဘေးရှငျး) လုပျတာလား။ ၂ မြိုးလုံးကိုလဲ အပြိုရညျပကျြစာရငျးထဲ ထညျ့သှငျးလေ့ မရှိပါ။
အမရေိကားမှာ ၁၉၉ဝ နောကျပိုငျး “Technically virgin နညျးလမျးအရ ပွောရရငျ အပြိုပါဘဲ” ဆိုတဲ့ ဖှငျ့ဆိုခကျြက ခတျေစားလာတယျ။သမားရိုးကြ လိငျဆကျဆံမှုတော့ မပွုဘူး၊ တခွားနညျးနဲ့သာ သာယာမှု ရှာတာပါလို့ လြှောကျလဲခကျြဖွဈယျ။ အဲဒါလောကျသာ လုပျတာမို့ကမြလဲ အပြိုစာရငျး ဝငျပါတယျလို့ ပွောတာကို Virginity pledges ချေါတယျ။ (ယေးလျ) တက်ကသိုလျက ပညာရှငျ Peter Bearman နဲ့Hannah Brueckner တို့က အဲလို အပြိုစာရငျး ဝငျပါတယျလို့ ပွောထာသူတှကေို နောကျ ၅ နှဈနတေော့ ဆနျးစဈတဲ့အခါ (STDs)လိငျကတဆငျ့ ကူးစကျရောဂါ ဖွဈနှုနျးက အဲလို မပွောသူတှနေဲ့ အတူတူဘဲ ရှိကွတာ တှေ့ရ တယျ။
လိငျဆကျဆံမှု မရှိဘဲလဲ အထကျကရေးခဲ့တဲ့ အခကျြတခြို့ ပကျြယှငျး နနေိုငျတယျ။ ဥပမာ စကျဘီးစီးတာ၊ မွငျးစီးတာ၊ အားကစား ပွငျးပွငျးထံထံ လုပျတာ၊ဂြှမျးဘားကစားတာတှေ ပါတယျ။ ဒီလိုကွောငျ့ အပြိုမှေး ပေါကျပွဲမယျဆိုရငျ မိနျးကလေး ကိုယျတိုငျတာငျမှ စုပျပွဲသှားခဲ့တာကို သိခငျြမှသိမယျ။ဒီမိနျးကလေးမြိုးဟာ တကယျတနျး ယောကျြားနဲ့ ဆကျဆံတဲ့ ပဌမဆုံးအကွိမျမှာ သှေးထှကျခငျြမှ ထှကျမယျ။ ဒါမြိုးကို အပြိုရညျပကျြယှငျးတယျလို့သတျမှတျတာ တရားပါသလား။ထငျမွငျခကျြတခုက မိနျးကလေး မှေးကတညျးက အပြိုမှေး ပါမလာကော မဖွဈနိုငျဘူးလား။ ဒီထောကျပွခကျြဟာ မမှနျပါ၊
မိနျးကလေးတိုငျးမှာ မှေးကတညျးက အပြိုမှေးဟာ လုံလောကျအောငျ ရှိနနေိုငျတဲ့ အကနျြ အကွှငျးတခု ဖွဈပါတယျ။Imperforatehymen အပြိုမှေး ပေါကျမနတောသာ ဖွဈနိုငျတယျ။ ဒီလိုဖွဈနသေူတိုငျးကိုတော့ Hymenotomy လုပျပေးရမယျ။တခြို့ အမြိုးသမီးတှကေ ဘယျနညျးနဲ့ ပေါကျ သှားသှား Hymenorrhaphy or Hymenoplasty ခှဲစိတျနညျးနဲ့ပွုပွငျကွပွီးသကာလ“Born again virginity ပွနျလညျရှငျလာသော အပြိုဖွဈခွငျး” လို့ ချေါကွတယျ။
မိနျးကလေးတယောကျမှာ ယောကျြားနဲ့ ပထမဆုံး လိငျဆကျဆံမှုရှိသှားပွီဆိုတဲ့ အခကျြကို ယဉျကြေးမှု အမြားစုမှာ “ပုဂ်ဂိုလျရေး သမိုငျးမှတျတိုငျတရပျ” လို့အလေးအနကျ သဘောထားကွတယျ။ ဘာအဓိပ်ပါယျ ဆောငျပါ သလဲ။ Savingoneself ကိုယျ့အပြိုရညျကို ထိနျးထားနိုငျစှမျးရှိသူ။ Losing one’s virginityကိုယျ့အပြိုဘဝကို ပေးအပျလိုကျသူ။ Taking someone’s virginity အပြိုရညျဘဝတခုကို ရယူလိုကျသူ။ Deflowering ပနျးကောငျး အညှနျ့ခြိုးခွငျး စသဖွငျ့သုံးစှဲကွတယျ။ ဒီလိုဖွဈသှားသူတယောကျဟာ “ဖွူစငျမှု၊ ညျကွညျမှု၊ သနျ့စဉျမှု ကုနျဆုံးသှားပွီ” လို့ တခြို့က ဆိုကွတယျ။ ဘာသာရေးတခြို့ကလဲ အဲလိုယူတာဘဲ။
တခြို့အသိုငျးအဝိုငျးတှမှော အပြိုစဈဖွဈခွငျးကို “ဂုဏျတရပျ၊ ဖွဈနိုငျရငျ အသကျနဲ့လဲပွီး ထိနျးသိမျးကာကှယျရမဲ့ ကိုယျပိုငျတနျဘိုးတရပျ” လို့ ယူဆကွတယျ။မိနျးမအင်ျဂါထဲကို Tampon, Menstrual cup လို ရာသီ လာတဲ့အခါ သုံးတဲ့ပစညျး ထညျ့သှငျးတာအပွငျ Medical examinations မြိုးပှါးလမျးကွောငျးထဲလကျ-ကရိယာ ထညျ့ပွီး ဆေးစဈတာကိုပါ တခြို့က လကျသငျ့မခံခငျြကွဘူး။ ဒီအခကျြကိုတော့ သဘောမတူပါ။
၂ နှဈအတှငျး မှေးကာစ မိနျးကလေး ၂ ယောကျထကျမနညျး မှေးကတညျးက (ဗဂြိုငျးနား) ပိတျနတောကို မိဘတှကေသိလို့ လာပွတယျ။ ထုံဆေးလေးနဲ့အပေါကျငယျလေး လုပျပေးလိုကျတယျ။ ဒီမိနျးကလေးတှကေို ဘယျသူ ဘယျဝါ ဖွဈတယျလို့ ဆရာဝနျက သမြားမပွောပါ။ မိဘတှကေလဲ သူတို့သမီးလေးတှဒေီလို လုပျထားတယျလို့ ပွောမယျ မထငျပါ။ ဒီတော့ မိနျးကလေးတှေ ကိုယျတိုငျလဲ သိနိုငျကွမယျ မဟုတျပါ။ တခွားမှာလဲ ဒီလို လုပျထားသူတှေ ရှိပါမယျ။ဖေါကျပေးလိုကျတာက လိုတာထကျ ကယျြသှားရငျ ဒမိနျးကလေးမြိုး မင်ျဂလာဦးမှာ နာတာ၊ သှေးထှကျတာ မဖွဈနိုငျပါ။အခြိနျတနျပမေဲ့ ရာသီမလာနိုငျလို့ အပြိုမှေး အပေါကျပိတျတာကို ခှဲစိတျပေးရငျလဲ ဒီလိုဘဲရှိမယျ။
အပြိုဖွဈခွငျးရဲ့ တနျဘိုးကို ငှကွေေးနဲ့ဖွတျတာဟာ ကိုယျခန်ဓာကိုရငျးပွီး စီးပှါးရှာတဲ့နရောမှာ သိသာတယျ။အပြိုမဟုတျသူ တယောကျရဲ့ တညတာ သတျမှတျခကျြထကျ အပြိုတယောကျကို အနညျးဆုံး (၁ဝ) ဆ ထားလေ့ရှိတယျ။ တကယျတော့တညဟာ တဘဝတာ ပွီးဆုံးခွငျးသာ ဖွဈပါတယျ။ ဂပြနျမှာ (ဂေးရှား) မယျလေးတှရေဲ့ အပြိုဘဝကိုMizuage ချေါတဲ့ပှဲလမျးသဘငျမှာ (လော့ဒျ) တှကေ ရယူခှငျ့ရှိတယျ။ ပိုကျဆံပေးရငျတော့ ခမျြးသာခှငျ့ ပေးတာလဲရှိသတဲ့။ ပုဂံခတျေဦး အရညျးကွီးတှလေဲဒီသဘော လုပျခဲ့ကွ တယျ။ စတေနာနဲ့ ပညာပေးတာလို့ ဆိုပါတယျ။ ထရေဝါဒ ဗုဒ်ဓဘာသာနဲ့ ဘရငျအနျောရထာ ကြေးဇူးနဲ့ ပနျးဦးလှတျတဲ့ အကငျြ့ပြောကျကှယျစခေဲ့တယျ။
Proof of virginity အပြိုစဈ သကျသခေံခကျြ
တခြို့အသိုငျးအဝိုငျးတှမှော သတို့သမီးဘကျက အပြိုစဈပါတယျဆိုတာ သကျသပွေနိုငျဘို့ လိုတယျ။ Intact hymen အပြိုမှေးရှိနတေယျဆိုတဲ့Certificate of virginity ဆရာဝနျ ထောကျခံခကျြ လိုတယျ။ ဒါမှမဟုတျ အပြိုမှေးပေါကျသှားလို့ထှကျတဲ့သှေး Nuptial blood-spotted bed sheetအိပျယာခငျးမှာ သှေးစှနျးတာ ပွရတယျ။Virginity test ဆိုတာလဲ ရှိပါတယျ။ အပြိုမှေးကို စဈဆေးတာပါဘဲ။ မတိကဘြူးလို့ အငွငျးပှါးကွပါတယျ။
၂၃-၁၁-၂ဝ၁၁ နေ့က AI လှတျငွိမျးခမျြးသာခှငျ့ အဖှဲ့ကွီးက လူ့အခှငျ့အရေး ခြိုးဖေါကျတာလို့ ထောကျပွဘူးတယျ။ ၂ဝ၁၁ အီဂဈြတျောလှနျရေးကာလမှာစဈတပျကနေ အဓမ်မပွုကငျြ့ခံရတယျလို့ဆိုသူ အမြိုးသမီးတှေ ကို ထိနျးသိမျး ထားတုံးမှာVirginity test လုပျခဲ့တာကို ဝနျခံပွီး ၂၇-၁၂၂ဝ၁၁ မှာ ဒီလိုလုပျတာကိုအစိုးရက တားမွဈလိုကျပါတယျ။ ဗွိတိနျမှာလဲ လုပျဘူးသေးတယျ။
Fiancee visa သတို့သမီးလောငျး (ဗီဇာ) လို့ ချေါတယျ။ ၁၉၇၉ ဇန်နဝါရီလထဲမှာ မင်ျဂလာဆောငျဘို့ဝငျလာသူ အမြိုးသမီးတယောကျကိုVirginity test လုပျစခေဲ့တယျ။ နောကျတော့ ပွငျလိုကျပါတယျ။အိန်ဒိယမှာလဲ အဓမ်မ ကငျြ့ခံရပါတယျလို့ ပွောသူတိုငျးကို ဒီလိုဆေးစဈတာမြိုး ၂၉-၁-၂ဝ၁၂ နေ့အထိ လုပျခဲ့တယျ။
အပြိုမှေးစဈတာအပွငျ Laxity of vaginal muscles ဗဂြိုငျးနား ကွှကျသားတှေ တငျးမာမှုအခွအေနကေို လကျ ၂ ခြောငျးစမျးသပျနညျးနဲ့ လုပျတယျ။ရုပျရှငျတကားမှာ ပါတယျ။ဒီနညျးက တိကမြှု မရှိတာ ကိုလဲ ငွငျးကွပါတယျ။ အာဖရိက နိုငျငံခြို့မှာ ငယျငယျကလေးကတညျးက မ-အင်ျဂါ နှုတျခမျးသားအကွီးနှဈခုကို ဆှဲခြုပျပေးတာကို Infibulation ချေါတယျ။ မင်ျဂလာမဆောငျခငျ ခြုပျကွိုး အစဈခံကွရတယျ။ ဒီအလေ့အကငျြ့မြိုးတှကေို ခတျေမီသူတှကေ ရှုတျခကြွတယျ။ဒါပမေဲ့ ၂ဝဝ၄မှာ (ဇငျဘာဘှေ) ခေါငျးဆောငျတဦးက ဒီလိုလုပျတာကွောငျ့ HIV ကူးစကျတာကို သကျသာစတေယျလို့ ပွောတော့ မငွငျးနိုငျကွဘူး။
အမြိုးသမီး အမြားစုဟာ ယောကျြားနဲ့ ပထမဆုံး လိငျဆကျဆံရငျ
– အပြိုမှေးပေါကျသှားလို့ သှေးထှကျမယျ၊ ၁-၃ ရကျအထိ နညျးနညျးထှကျမယျ။
– မ-အင်ျဂါ ဖူးရောငျနမေယျ၊ ၁-၃ ရကျကွာ နာနမေယျ။
– ၃ ရကျထကျ ပိုကွာနရေငျ၊ သှေးဆငျးတာလဲ မြားမယျဆိုရငျ ဆရာဝနျပွပါ။
“Romantic love စိတျလှုတျရှားမှုက ရတဲ့အခဈြ နဲ့ Sexual jealousy လိငျပိုငျးဆိုငျရာ သဝနျတိုမှုဟာ Universal features of human relationships နရောတကာမှာ မှနျကနျတဲ့ လူမှုဆကျဆံရေး ဖွဈတယျ” လို့ ဆိုရှယျ-စိတ်တဗဒေ ပညာရှငတှကေ ဆိုကွပါတယျ။